Kedu ihe bụ kombucha? Uru nke mmanya ọgbara ọhụrụ | Bezzia
Nke Torres | 11/10/2021 16:00 | Nri
Ọ bụ ezie na ọ bụ mmanya ọgbara ọhụrụ ruo oge ụfọdụ, kombucha nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme n'okpuru eriri ya. Ihe ọ drinkụ Thisụ a sitere na shuga, nje na tii, sitere na China n'ihi ọtụtụ ihe bara uru ya, ka amara na omenala ahụ dịka Tsche Chukwu. Ihe ọ drinkụ drinkụ nke nwere ọtụtụ ndị na -eso ụzọ n'etiti ndị na -eri ya na -abụghị n'efu, abụrụla ngwaahịa kpakpando nke ndị na -akwado nri dị oke mma.
Kombucha enwetara site na gbaa ụka tii, na -abụkarị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ tii ojii, yana shuga na ọdịbendị ụfọdụ nke yist na nje. A na -eke usoro a ụzọ abụọ gbaa ụka, n'oge nke mbụ, ụmụ nje na -ejedebe oke shuga na nje. N'oge gbaa ụka nke abụọ, a na -agbakwụnye mkpụrụ osisi, nke bụ nke na -emecha nye mmanya ahụ ụtọ.
1 Uru nke kombucha
Uru nke kombucha
Taa enwere kombucha dị iche iche dị iche iche ma enwere ike zụta ya na oke nhịahụ. N'etiti ndị na -eme ihe, ndị na -emepụta ọdịnaya na ndị na -eso ụzọ netwọkụ mmekọrịta, kombucha abịa ịchupu ụdị ihe ọ softụ softụ ndị ọzọ dị nro. Ihe enweghị mgbagha dị oke mma ebe ọ bụ na n'adịghị ka ihe ọ drinksụ otherụ ndị ọzọ, fermented a bara ezigbo uru maka ahụike. Ị chọrọ ịma ihe niile kombucha nwere ike ime maka ahụike gị?
Njirimara ndị a na -ekwu maka ihe ọ drinkụ milụ puku afọ a enweghị njedebe, n'etiti ha, ndị a:
Mma mgbaze: Kombucha bụ ihe ọ digestiveụ digestiveụ na -agbari nri nke ukwuu, ekele maka ụmụ irighiri ihe ndị na -enyere aka mee ka eriri afọ macrobiota sie ike.
Na-ebelata ọbara mgbali.
Mma cholesterol etoju n’ime ọbara
Nyere aka wusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Na -achịkwa mbufe eriri afọ ọ dịkwa oke mma n'ịgwọ nsogbu afọ dị ka afọ ntachi.
Mmalite ahụ erughị ala nke ọrịa premenstrual syndrome.
Na -enyere aka melite ahụike anụ ahụ, mbọ na ntutu.
Na -ebelata isi ọwụwa.
Nyere aka na-edozi ahụ ebe ọ bụ ihe na -asachapụ ya na ihe ọ antioxidụ antioxidụ antioxidant.
Mma ọrụ akụrụ.
Agbanyeghị na ọ bụ ngwaahịa ahụike dị na mbụ, a na -emegide ya n'ọnọdụ dị iche iche. Dị ka ọmụmaatụ, ndị nwere nsogbu akụrụ ekwesịghị iri nri ihe ọ drinkụ drinkụ a. Kombucha adabaghị ụmụaka, ụmụ nwanyị dị ime ma ọ bụ ụmụ nwanyị n'ime oge inye ara, ma ọ bụ maka ndị nwere nsogbu mgbochi ọrịa. Ọ bụrụ na ịnọ n'etiti otu ndị a, ọ ka mma na ị gaghị ewere kombucha yana ka gị na dọkịta gị hụ ụdị ngwaahịa ị nwere ike iri na -enweghị ihe egwu.
Nke mbụ, ekwesịrị icheta na ọ bụ ngwaahịa emepụtara site na ịgba ụka, nke gụnyere ngwakọta nke yist, nje na shuga. Nke ahụ bụ ikwu, nwere obere mmanya Dịka ihe ọ drinkụ drinkụ ọ bụla ọzọ na -esi ike, ọbụlagodi na ọ pere mpe, a ga -eburu n'uche ya n'ọnọdụ ụfọdụ. N'aka nke ọzọ, kombucha abụghị pasta, nke ahụ bụkwa ihe ọzọ kpatara na ọ na -ada mba n'ime ụmụ nwanyị dị ime, ebe ọ bụ na nwa ebu n'afọ nwere ike imebi.
Maka ikpe niile nke ihe ọ drinkụ milụ puku afọ a, agbanyeghị na ọ bụ ihe ọhụrụ nye anyị, anaghị egbochi ya, ihe ndị ọkachamara na -atụ aro bụ ịmalite obere. Atụla anya na ị ga -ahụ ezigbo ụtọ site na mụọ nke mbụKama nke ahụ, ọ na -ahapụ mmetụta acidic. Agbanyeghị, ọ dị mfe ịnweta ya, ebe ọ na -afụ ụfụ ma na -enye ume ọhụrụ, na -eme ka ọ bụrụ nnukwu nnọchi maka ihe ọ softụ softụ ndị ọzọ dị nro na ọbụna biya.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịnwale kombucha, ị kwesịrị ịmara na ndị ọkachamara na -atụ aro ka ị ghara ị drinkụ ihe karịrị otu iko n'ụbọchị. Nke a bụ n'ihi na ihe ọ drinkụ drinkụ ahụ nwere shuga ma nwee ike ịlaghachi azụ n'ọtụtụ oge. Ọzọkwa, echefula na o nwere obere mmanya, nke nwere ike bụrụ nnukwu nsogbu. Chọpụta ihe ọ drinkụ drinkụ a nke bịara ịgbanwe ụwa nri ma na -anụ ụtọ ọtụtụ ihe na uru ahụike ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Nri » Kedu ihe bụ kombucha? Uru nke trendy ọ drinkụ drinkụ
Manicure French n'ụlọ maka obere mbọ